Neymar Jr oo sharraxay sababta uusan uga fikirin ku guuleysiga Ballon d’Or – Gool FM
Neymar Jr oo sharraxay sababta uusan uga fikirin ku guuleysiga Ballon d’Or
Ahmed Nur April 28, 2021
(Paris) 28 Abriil 2021. Kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ayaa caawa kulanka lugta hore ee wareegga nus-dhammaadka Champions League la ciyaari doonto kooxda Manchester City iyadoo wareeggan ay sanadkii labaad oo xiriir ah ay ciyaareyso markii ugu horreysay taariikhdeeda.
Ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara PSG ee Neymar Jr ayaa ka hadlay rajada ay kooxdiisa ugu guuleysan karaan tartanka horyaallada Yurub, isagoo sidoo kale carrabka ku dhuftay hammigiisa ku guuleysiga Ballon d’Or.
Neymar oo arrimo kala duwan kaga hadlay shirkiisii jaraa’id ee kahor ciyaarta caawa ee ay Man City wajahayaan ayaa dhanka kale sheegay inuu wada xaajood heshiis kordhin ah u socdo isaga iyo naadigiiisa, sidoo kalena uu ku faraxsan yahay nolosha Paris.
“Aad ayaan ugu faraxsannahay xilli ciyaareedka ay qaadaneyso PSG, xittaa kama fikirayo Ballon d’Or, ma ahan wax aan hadda ku taammayo, inaa ka fikiranna mar hore ayaa iigu dambeysay” ayuu laacibka reer Brazil ku sheegay shirkiisii jaraa’id.
Neymar halkaas ma uusan uga harin sheekada la xiriirta abaalmarinta kubadda dahabka, waxaana uu hadalkiisa ku daray inuu aad u daneynayo hanashada tartanka Champions League mar kale.
“Waxaan rabaa inaan ku guuleysto Champions League, taas ayaa farqi u sameyneysa nolosheyda iyo waayaheyga ciyaareed, mar walba oo aan sii weynaado waxaan rabaa inaan gadaal eego oo aan arko anoo ku guuleystay labo, saddex ama afar Champions League, taas ayaanna ah waxa ugu muhiimsan” ayuu yiri 29-jirka weerarka ka ciyaara.
Neymar Jr ayaa Barcelona kula guuleystay tartanka Champions League xilli ciyaareedkii 2014-15 isagoo fasalkaas toban gool ka dhaliyay tartanka horyaallada Yurub, waxaanna goolashaas ku jiray mid uu ka dhaliyay Juventus ciyaartii fiinaalka ee ay Barca 3-1 kaga adkaatay kooxda reer Taliyaani ciyaar ka dhacday magaalada Berlin ee caasimadda dalka Jarmalka.
Inuu mar ku dhowaaday u ciyaarista Man City, xiddigii ahaa laacibka uu ugu jecel yahay Ingiriiska, sababihii burburiyay heshiiskii uu ugu biiri lahaa Juve & xaqiiqooyin qarsoon oo ku saabsan Pep Guardiola
Marcelo oo arrimo aan isboortis ahayn ku seegaya ciyaarta kooxdiisa Real Madrid ay booqaneyso Chelsea